साथीहरूसँग घडी 55
गन्धको अर्थ के हो? यो कसरी कार्य गर्दछ; शारीरिक कणहरू सनसनीको उत्पादनमा संलग्न हुन्छन्, र कुन भागमा जीवनमा बजाउने खेल खेल्छ?
केलाई गन्ध भनिन्छ, वस्तुहरूका केही गुणहरूको अवधारणा हो। यी गुणहरूले मानिसमा गन्धको अ organ्गको माध्यमबाट कार्य गर्दछ, जहाँबाट उनी घाँसेको स्नायुसम्म पुग्छन्। स्नायुले सूक्ष्म तत्व, जुन भौतिक वस्तुमा हुन्छ, मानव शरीरमा रहेको इकाईमा सञ्चार गर्दछ। यो इकाई अस्तित्व हो जुन जानकारीको माध्यमबाट वस्तुको प्रकृति बुझ्दछ जुन यसले गन्धको स्नायु मार्फत प्राप्त गर्छ। इकाई एक भूतपूर्व, भूत वर्गको प्रकृति प्रेत हो। गन्धको तत्वसँग जोडिएको छ र मानव तत्वको संरचना र संरचनामा प्रवेश गर्ने जीवहरू मध्ये एक हो। सुगन्धित तत्व पृथ्वीको तत्वको हो, र यस कारणले पृथ्वीको प्रकृतिको गुणहरू बुझ्न सक्दछ, जुन भौतिक वस्तुहरू द्वारा प्रदर्शन गरिएको छ। त्यसोभए "गन्धको भावना के हो र यसले कसरी कार्य गर्दछ?" भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर यो हो कि यो एक शरीर हो, भौतिक शरीरमा मानव तत्त्व भित्र रहेको पृथ्वी तत्व हो, जुन गन्धको गन्धले भौतिकमा केही विशेष गुणहरूको प्रकृति बुझ्दछ। शरीर, जसलाई गन्ध वा गन्ध भनिन्छ।
यी विशेषताहरू गन्ध मात्र द्वारा महसुस गरीन्छ। गन्ध यस सबै एलिमेन्टल गर्दछ। गन्ध भनेको यसको खाना हो, जसले यसलाई पोषण दिन्छ र यसलाई सँभाल्छ। यो बाहिर पृथ्वी तत्व को केहि विशेषताहरु र सर्तहरु लाई महसुस गर्दछ। गन्ध भनेको अदृश्य, सूक्ष्म पृथ्वी तत्त्व हो, जो गन्धको तत्त्वको संरचनामा प्रवेश गर्दछ र यस्तै मानव तत्वमा।
वस्तुको भौतिक कणहरू जुन यसको गन्धले महसुस गरिन्छ गन्धको संवेदनाको उत्पादनमा प्रवेश गर्दछ। एक्लो कणहरू मात्र होइन जुन भौतिक वस्तुसँग सम्बन्धित थियो तर पृथ्वी तत्वका त्यस्ता कणहरू जुन वस्तुको माध्यमबाट प्रवाह भएको थियो, यसले गन्धको उत्तेजनालाई निम्त्याउँछ। पृथ्वी तत्व एक ज्वार जस्तै हो, वस्तुको माध्यमबाट पछाडि र बगिरहन्छ। प्रवाह असीम, अदृश्य कणहरू द्वारा बनिएको हो जुन एक कम्प्याक्ट वस्तु जस्तो देखिन्छ; तर यदि दृश्यको भित्री भावना पर्याप्त उत्सुक छ र दिमागले प्रवाहको विश्लेषण गर्न सक्दछ भने, त्यो प्रवाह कणहरू मिलेर बनेको रूपमा बुझिनेछ।
जब कुनै व्यक्तिको भौतिक वातावरणले वस्तुको भौतिक वातावरणको गन्ध आउँदछ - जुन वातावरण कणको बनेको बनेको हुन्छ - कणहरु गन्धको वातावरणमा महसुस हुन्छ, जब ती गन्धको स्नायुमा सम्पर्क गर्छन्। गन्ध भनेको वस्तुहरु को स्पष्ट शारीरिक विशेषता हो। प्रत्येक भौतिक वस्तुको आफ्नै विशिष्ट भौतिक वातावरण हुन्छ, जसमा कणहरू निलम्बित र प्रसारित हुन्छन्। तर केहि वस्तुहरू गन्धित गर्न सकिन्छ। कारण यो छ कि गन्धको भावनाबाट धारणा प्रशिक्षित छैन र पर्याप्त राम्रो छैन। जब गन्धको भावनालाई प्रशिक्षण दिइन्छ, अन्धाको मामलामा, धेरै वस्तुहरू सुगन्धित गर्न सकिन्छ जुन अब सामान्यतया गन्ध बिनाको रूपमा लिइन्छ।
अझै गन्धको गहिरो अनुभूति छ, एक भित्री भाव, जुन विकसित हुन सक्छ र जुन केही व्यक्तिले पहिले नै विकसित गरेका छन्, जसको माध्यमबाट भौतिक नभएको वस्तुहरूको गन्ध महसुस गर्न सकिन्छ। अर्को संसारका प्राणीहरूले आफूलाई गन्धबाट चिनिन सक्छन्, तर यो शारीरिक गन्ध होईन।
अंश जुन जिउँदोमा खेल्छ यसले जीवनको मर्मतसम्भारमा गन्ध आउने गर्दछ। खानाको गन्धले ग्यास्ट्रिक जुस बहाउँदछ र तिनीहरूलाई उत्तेजित गर्दछ, जस्तै राम्रोसँग तैयार गरिएको तालिकाको दृश्यले। पशुहरूले तिनीहरूको खानाको गन्ध महसुस गरेर ठाउँहरू पत्ता लगाउँदछन् जहाँ उनीहरू खाना पाउन सक्छन्। तिनीहरूले गन्धले दुश्मन र खतराहरूको उपस्थिति पत्ता लगाउँदछन्।
जबकि मानव वर्तमानमा एक सूक्ष्म सारको अवशोषणबाट पोषित छ जुन उसको प्रणालीले उसले खान्ने स्थूल भौतिक खानाबाट बाहिर निकाल्छ, भविष्यमा जब मानिससँग आफ्नो शारीरिक शरीरको राम्रो नियन्त्रण हुन्छ भने उनलाई सम्भव तुल्याउन सकिन्छ गन्धको भाव उसले अब शारीरिक खाना को रूपान्तरण बाहिर पाचन द्वारा प्राप्त गर्न को लागी। उसको सुगन्धित तत्त्व तब भौतिक शरीरलाई पोषण पुर्‍याइनेछ। स्वाद र गन्धका दुई इन्द्रियहरू, तथापि, एक्लै गन्धले पोषण पुर्‍याउन पहिले उनीहरू हालको अवस्थामा रहेको अवस्थाबाट धेरै परिवर्तन गर्नुपर्दछ। त्यसो भए सूक्ष्म शारीरिक कणहरू जो गन्धको तत्व द्वारा अवशोषित हुनेछन् शारीरिक शरीर पोषणको माध्यम हुनेछ।
कल्पना के हो? यसलाई कसरी खेती गर्न सकिन्छ र प्रयोग गरिन्छ?
कल्पना दिमागको त्यो अवस्था हो जसमा दिमागका छवि संकाय चेतनापूर्वक काम गर्दछन् जसको मनसाय संकायले कल्पना गरेको छ र जुन फोकस संकायले ल्याएको छ र दायरा भित्र राख्छ। दिमागका यी तीन फ्याकल्टीहरू सीधा कल्पनासँग सम्बन्धित छ। अन्य चार संकायहरू अप्रत्यक्ष रूपमा चिन्तित छन्। अँध्यारो संकायले कल्पनाको साथ हस्तक्षेप गर्दछ, जस्तै यसले दिमागका अन्य कार्यहरू गर्दछ, र त्यसैले कालो संकाय यस्तो स्थितिमा हुनुपर्दछ जहाँ कल्पनाको कार्यलाई अनुमति दिन पर्याप्त नियन्त्रण गरिएको छ। समय संकाय कल्पना को काम मा प्रयोग सामाग्री प्रस्तुत गर्दछ। प्रकाश संकायले कल्पनाको काम कसरी गर्नुपर्दछ देखाउँदछ। I-am फ्याकल्टी कल्पना को काम को पहिचान र व्यक्तित्व दिन्छ। कल्पना मनको राज्य हो, र आफैंमा इन्द्रियको होइन। कल्पनाशक्तिको काम दिमागमा सञ्चालन हुन्छ यो दिमाग द्वारा इन्द्रियहरुमा सम्बन्धित हुनु अघि र इन्द्रियहरुलाई भौतिक संसारमा अभिव्यक्ति दिन पहिले जुन कल्पनाशक्तिमा गरिएको छ। यो कल्पनाको मामला हो। यद्यपि यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि जसलाई प्राय जसो कल्पना भनिन्छ वास्तवमा कल्पना नै हुँदैन। कल्पना वा संज्ञाको शव्दको अर्थ बुझ्न नसक्ने कुरा भनेको इन्द्रियमा दिमागको खेलाडी हो, वा उच्च डिग्रीमा जब इन्द्रियले बाध्य पार्छ त्यो कुराको पुनरुत्पादन वा प्रस्तुत गर्न दिमागले काम गरिरहेको हुन्छ। इन्द्रियलाई खुशी दिन र नयाँ आनन्द वा समस्याहरू प्रदान गर्न जुन इन्द्रियहरूले संकेत गरेको छ र दिमागमा नेतृत्व गर्दछ। यस अवस्थाको मामलामा, जसलाई झूटो कल्पनाको रूपमा भनिएको छ, दिमागका सातवटा संकायहरू फोकस संकाय मार्फत आक्रोशित छन्; तर यी आन्दोलनहरू फोकस फ्याकल्टी मार्फत अन्य प्राध्यापकहरूको एक्सेटेसन मात्र हुन् र संकायको काम होइन। फोकस संकाय दिमागको एक मात्र संकाय हो जुन सीधा औसत व्यक्तिको दिमागको साथ सम्पर्कमा रहन्छ। अरु छ वटा प्राध्यापक सम्पर्कमा छैनन्। तिनीहरूको कार्य फोकस संकाय को माध्यम बाट प्रेरित छ।
वास्तवमा कल्पना भनेको के हो भनेर अझ राम्ररी बुझ्नको लागि यसलाई झूटो कल्पना भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ, जुन केवल झुठो कुरा भनिएको कल्पना मात्र हो। गलत कल्पना दिमागको संकायको सचेत कार्य होइन, तर एउटा संकायको क्रियाकलाप, फोकस संकाय मात्र हो जुन इन्द्रियहरू द्वारा उत्तेजित हुन्छ र जुन उत्तेजित हुँदा अरु छ वटा संकाय वा उनीहरूमध्ये केहीको प्रेरित आन्दोलनको कारण हुन्छ।
फ्यानसीहरू, दिन सपनाहरू, मूनिंग, कल्पनाशक्ति होइनन्। प्रकृतिका स्वरूपहरू र पक्षहरूको पुनरुत्पादन कल्पना मात्र होइन। कुनै पनि कामको प्रतिलिपि बनाउनु, यो प्रकृति को हो वा मानिस, कल्पना होइन, यद्यपि कुशलतासाथ यो प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। कल्पना सृष्टि हो। कल्पनाको हरेक काम एक नयाँ सृष्टि हो। कल्पनाले प्रकृतिलाई नक्कल गर्दैन। प्रकृतिले कल्पनाको काम कसरी गर्ने भनेर दिमागलाई देखाउँदैन। कल्पनाले प्रकृतिलाई उसको सबै रूपहरू र रंगहरू र ध्वनि र विविध पक्षहरू प्रदान गर्दछ। यिनीहरू प्रकृतिले मनले बनाउँदछन् स्वभावले होइन।
कल्पना खेती गर्न — त्यो हो, दिमागको राज्य जसमा छवि संकाय, प्रेरणा संकाय, र फोकस संकाय समन्वय गरी समन्वयका साथ आफ्नो काम गर्दछन्, जबकि कालो संकाय सीमित वा दबाइन्छ, र तीन अन्य संकायहरू , समय संकाय, प्रकाश संकाय, र I-am संकायले यस कार्यमा योगदान पुर्‍याउँछ - यहाँ उल्लेखित प्रणालीलाई बुझ्नु आवश्यक छ, जुन एक मात्र त्यस्तो प्रणाली हो जसले दिमागका कार्यहरूको अन्तर्दृष्टि दिन्छ।
दोस्रो चरण भनेको विचारको विषय कल्पना गर्न सक्षम हुनु हो, र अर्को चरण भनेको इमेज फ्याकल्टीलाई मनसाय संकाय र फोकस फ्याकल्टीसँग मेल खाने अभ्यास गर्नु हो। प्रश्नकर्तालाई सन्दर्भित गरिन्छ 1913 मा WORD को मे र जून अंकमा कल्पनामा दुई लेखहरू जुन प्रकाशित भए। दिमागका फ्याकल्टहरूको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ लेख, "एडेप्ट्स, मास्टर्स, र महात्माहरू"W WORD मा मुद्रितअप्रिल, सक्छ, जुन, जुलाई, र अगस्ट, 1910।